Zimbabwe Ine Vanhu Vana Vafa, Uye Makumi Maviri neVasere Vabatwa neCovid-19
Huwandu hevanhu vabatwa neCoronavirus huchiri pamakumi maviri nevasere, uye vakashaya nechirwere vava vana.
Zimbabwe yaongorora vanhu zviuru zvina nemazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe.
Bazi rezvehutano rinoti kusvika nezuro, Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vabatwa neCoronavirus ichiteverwa neBulawayo.
MuHarare mune vanhu gumi nevaviri vabatwa nechirwere ichi, uye muBulawayo mune vanhu gumi.
KuMashonaland East kune vanhu vana kozoti matunhu eMatabelelalnd North neMashonaland West ane munhu mumwe akabatwa neCoronavirus.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvehutano kuti pane vanhu vangani vaongororwa nhasi uye kuti zvii zvabuda muongorora iyi.
Bazi rezvehutano rinozivisa zvinenge zvabuda muongororo dzayo manheru ega ega uye izvi zvinoitwa tabva pamhepo.
Zvichakadai, varimi vefodya nhasi vazivisa kuti vanofara chose nedanho ratorwa nehurumende rekutora basa ravo pamwe nekutengesa fodya sebasa rakakosha panguva ino apo nyika yakavharwa senzira yekudzvirira kupararira kweCoronavirus vachiti izvi zvichaita kuti vatengese fodya yavo pasina kunetsana kana kuvhiringidza nemapurisa kana vamwe vanochengetedza mutemo.
Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi vefodya munyika, reZimbabwe Tobacco Assocciation, VaRodney Ambrose, vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho iri nemufaro.
Vanoongorora nyaya dzehupfumi vakazvimrira, VaMasimba Kuchera, vaudzaStduio 7 danho rehurumende rakanaka chose sezvo fodya yakakosha pahupfumi hwenyika nekuti rinounza mari yekunze.
VaAmbrose vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo dzatogadzirira kutengesa fodya vachiti vangomirira chete kuti bhanga guru renyika rigadzirise nyaya yekuti vachabhadharwa sei.
Misika yefodya yaifanira kuvhurwa svondo rino asi izvi zvakambomiswa kuitira kuti pagadziriswe nyaya yekuti varimi vachabhadharwa sei.
Murimi wefodya kuNyabira pedyo neHarare, Amai Helen Shumba, vaudza Studio 7 kuti vatogadzirira kutengesa fodya yavo.
VaKuchera vanoti zvakakosha kuti hurumende neReserve Bank of Zimbabwe vabude pachena nekukasika kuti varimi vanobhadharwa sei kuitira kuti misika yefodya ivhurwe kuitira kuti nyika iwane mari yekunze nekukasika.
Gore rapfuura pakamboita mutauro, pakavhurwa misika yefodya varimi vachiramba kutengesa fodya yavo mushure mekunge hurumende yaputsa chibvumirano chayainge yaita nevarimi chekuti vaizobhadharwa nemadhora ekuAmerica.
Mukuru wekambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefodya munyika, yeTobacco Industries Marketing Board, Dr Andrew Matibiri, vaudza Studio7 kuti RBZ inotarisirwa kuita musangano nevarimimangwana kuitira kuti vabude nechisungo chekuti varimi vachabhadharwa sei misika isati yavhurwa.
VaMatibiri vaudza Studio 7 kuti mangwana chaiwo vari kutanga zvidzidzo zvekudzisa varimi zvavanotarisirwa kuita pakuendesa fodya kumisika nekuita pamisika kudzivirira kupararira kweCoronavirus.
Zvimwe zvezvinhu ndezvekuti motokari dzinotakura fodya kuendesa kumisaka dzinobvimidzwa vanhu vaviri chete uye kuti vana vane makore ari pasi pegumi nematanhatu havabvumidzwe pamisika yefodya.
Gore rino panenge pasina bhanga pamisika yefodya uye varimi vese vachaenda kumisika vachange vachiongororwa nekuita zvese zvinotarisirwa nebazi rezvehutano neWorld Health Organisation kudzivirira kupararira kweCoronavirus.
TIMB iri kukurudzira vanotenga fodya kuti vatenge fodya munzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekuderedza huwandu hwevarimi vanoenda kuHarare kuzotengesa fodya yavo.